हाँस्यकलाकार माग्ने बुढाको जन्मदिन आज, कति बर्षमा लागे जान्नुहोस् । - Mitho Khabar
April 10, 2020 mithokhabarLeaveaComment on हाँस्यकलाकार माग्ने बुढाको जन्मदिन आज, कति बर्षमा लागे जान्नुहोस् ।
त्यसैले आजको दिनमा माग्ने बूढालाइ लाइ भन्दा पनि उस्लाइ जनामदिने बुबा आमा लाइ धन्यवाद छ !नमन छ !!!!
अन्जु पन्त भन्छिन ‘विवाह काँडा हो, झिकिसकेंकी छु अर्को किन रोप्नु ? यस्तै रहेछ जिवन(हेर्नुहोस भिडियो)
June 24, 2020 Suman Pandey
बाख्राले जन्मायो आश्चर्य लाग्दो पाठा